Tracker SMS For Android Tilifoonada Free
Basaasnimo ku Qoraallada qofka waxaa laga yaabaa in kutub laakiin adag. In kastoo ay suurtogal tahay dhigi karaa iskaashi halis ugu, waxay bixisaa kana dayi wax si qaab nololeed u gaar ah in ay la isku dayayo karaa in la dado. Basaasnimo ku fariimaha qoraalka ah ee ay noqon karaa hab si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan waxa ay samaynayaan marka youre aan ku xeeran haddii aad qabto sabab u tahay kalsooni qof ee noloshaada.
exactspy sababtoo ah hadda waa mid ka mid ah trackers spyware dheeraad ah oo si fiican u jeclaa on suuqa. Just tan waxaa la-yaqaano iyo sidoo inkasta oo macnaheedu ma aha in ay tahay wax istaahila dollars ah. Dad badan waxay maal-gashiga iyo markaas noqon xumahay in mustaqbalka.
Tracker sms Free la'aan phone target
– Back ilaa CSV / HTML / PDF qoraalka wada hadalka spy
Tracker SMS For Android Tilifoonada Free iyo exactspy waxay leedahay sifooyin dhowr ah:
– Nidaamka meelaynta aduunka kaalinta la soconaa. Hel iyo loola socdo dhaq dhaqaaqa ee taleefanka gacanta! Realtime GPS navigation tracking, la shaxda kaarku oo lacag la'aan ah oo loogu hoggaaminayo waddada ugu
– La xiriir duubay. Waxa ay noqon doontaa suurto gal ah in ay bixiyaan CHAT dareenka dhigay ka mid ah telefoon gool.(Google android Iyo taleefannada gacanta macruufka ah)
– Unugyada soo socda ee telefoonka lagu xaddidaadda. In la yareeyo tirada kasta oo ah wicitaanka telefoonka ee imaanayey.
– Ku soco oo SMS. Isha ku hay DHAMMAAN farriimaha sms helay ama siin ka imanaya taleefanka gacanta. Basaas ah oo ku saabsan qoraallada aan la exactspy
– Keylogger. exactspy sifo keylogging sii dayn doonaa inaad akhrido wax kasta oo yar macaamiisha gool aad qasabadaha on qalabka mobile.
– Cpanel. Dhibyaraan oo dhan macluumaad abuse iyo telefoon internet-ka mar walba ka Laptop kasta ama computer
– Hallayn. 10-maalinta lacag-dib guarantee
– La soco jadwalka. Isha ku hay dhamaan hawlaha kalandarka, kulan diyaar iyo cadaymaha.
– Akhri fariimaha email. Ilaaliye farriimaha ee xilka la dhaarin email
– Hubi isticmaalka Web: taariikhda ay sahamiyaan, Bookmarks web site, disables goobaha internet-
– Warbixin degdeg ah gaystay: Basaas Skype, Basaas WhatsApp iyo basaas Fb, Basaas Viber iyo basaas iMessage
– Dhiba. Waxaad awoodi doontaa in aad ku hareereysan taariikhda la exactspy
– Hago. Waxaad ka heli doonaa gacanta ku ah handheld fog fog ee guud ahaan telefoonka ah la iman Jaha exactspy: noocan ah u shaqeeyaa wipeout qalab, fog qalab Carqaladeynta tahay under maamulka noqon doonaa
– La arki karin! Isticmaalka batari Minor
– Qarsoodi! Ma isticmaali doonaa Text amarrada fariin ay ku karto telefoonka Ujeedada, dammaano sirta ah ee aad track haynta gaarka ah ee
– La taaban karo! Oo taageertay magacyada brand telefoonka gacanta ee waaweyn iyo os: Phone Android mobile, telefoonada gacanta iPhone
Waxaad Download karaa: Would You Like SMS Tracker For Android Phones Free ?
Free sms tracker app for android, Free sms tracker for any phone, Free sms tracker without installing on target phone, Tracker sms Free la'aan phone target, Tracker SMS For Android Tilifoonada Free
← exactspy – Apps To soo basaasaan On fariimaha qoraalka ah iPhone Free ?